इच्छाविपरीत जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राखेको भन्दैपतिविरुद्ध बलात्कार मुद्दा बढे – PathivaraOnline
Home > समाज > इच्छाविपरीत जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राखेको भन्दैपतिविरुद्ध बलात्कार मुद्दा बढे
इच्छाविपरीत जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राखेको भन्दैपतिविरुद्ध बलात्कार मुद्दा बढे
admin January 18, 2019 समाज	0
परासी : पतिले बलात्कार गरेको भन्दै पश्चिम नवलपरासी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दुई वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। मुद्दा दर्ता गराउनेमा रामग्राम नगरपालिका र सरावल गाउँपालिकाका दुई महिला छन्। पुस दोस्रो साता उनीहरूले प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। इच्छाविपरीत जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राखेको भन्दै मुद्दा परेपछि अदालतमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको भट्टले बताए।
बलात्कारका मुद्दा दिने श्रीमती र श्रीमानबीच अदालतमा अंश मुद्दा र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा चलिरहेका छन्। मुद्दा दिने दुवै जनाका सन्तान छन्। मुद्दा दिनेमा ३० देखि ४० वर्षसम्मका महिला छन्। एक दम्पतीका दुई छोरी छन् भने अर्को दम्पतीका एक छोरा छन्। उनीहरूको ८ वर्षअघि विवाह भएको हो। छोराछोरीलाई समेत हेरचाह नगरी आफूखुसी हिँड्ने गरेका कारण छुट्टै बस्ने गरेको पीडित महिलाले जनाएका छन्।
हेरचाह पनि नगर्ने र उल्टै सम्बन्धविच्छेद र अंश दिएर छुट्ट्याउने भन्दै श्रीमानले अदालतमा मुद्दा दिएको महिलाले जनाएका छन्। त्यसरी मुद्दा दिएपछि महिलाहरू श्रीमानप्रति आक्रोशित भएको प्रहरीको बुझाइ छ। त्यसरी मुद्दा दर्ता गराएका महिलाले तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण(मेडिकल जाँच) गराउने गरेको पाइएको छ। प्रमाणका आधारमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ।
उजुरीबाहेक पनि केही महिला इच्छाविपरीत श्रीमानले यौन सम्बन्ध राख्ने गरेको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। लामो समयदेखि श्रीमान््सँग अलग बस्दै आए पनि इच्छाविपरीत धम्क्याएर यौन सम्पर्क गर्ने गरेको पीडित महिलालाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ। आफूहरूलाई हेरचाहसमेत नगर्ने र कोठामा एक्लै भएको मौका छोपेर जबर्जस्ती गर्न आउने गरेको पीडित महिलाको भनाइ छ।
मुलुकी अपराध संहितामा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरे ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। तर, कानुनअनुसार दर्ता भएका दुई मुद्दा भने वैवाहिक सम्बन्ध कायम नभएको अवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
श्रीमान विरुद्ध बलात्कार आरोपमा मुद्दा दिएपछि गाउँलेले पीडित महिलालाई सामाजिक बहिष्कार गर्न थालेको पाइएको छ। पति/पत्नीबीचको यौन सम्बन्धलाई बदनाम गराउने प्रयास गरेको भन्दै गाउँले महिलाप्रति आक्रोशित बन्न थालेका हुन्। पतिलाई अनाहकमा दुःख दिएको भन्दै गाउँले प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको प्रहरी उपरीक्षक भट्टले बताए।
प्रहरी कार्यालयमा आफूविरुद्ध गएको जानकारी पाएपछि पीडित महिलाले गाली गलौज गर्न थालेपछि गाउँले आक्रोशित भएका हुन्। पीडित महिला पसलमा सामान किन्न र छिमेकीकहाँ नुन, तेललगायत सामान सापट माग्न जाँदासमेत नदिने गरेको गाउँलेलाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ।
घर फर्कन नपाएका बालकुमारले गरे साउदीमा झुन्डिएर आत्महत्या, गर्ववती श्रीमती र छोरीको यस्तो बिचल्ली
गुरु बमजन बलात्कारी होइन भन्दै छोरीलाइ नै दोषी देखाउदै बमजनको आश्रममा नै यसरी गर्जिए बाबु , छोरीको कर्तुत बाहिर ल्याए (भिडियो)
सालीले जुत्ता फिर्ता नगरेपछि जंगिए बेहुलाको आफन्त, जुत्ता नदिए सम्बन्ध नै तोड्नेसम्म (हेर्नुस् भिडियो)
श्रीमतिको सं’बेदनशील अंगमा अ’गु’ल्टो को’चेर घा’इते बनाउने श्रीमान अन्ततः यसरी समातिए ! (भिडियो हेर्नुस्)
‘लोग्ने भनेको स्वास्नीको शरीर बलिया हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ’- सुष्मा
बागलुङका एम्बुलेन्स चालक सङ्क्रमित आइसोलेशनमा बस्दा नाचेको भिडियो बन्यो सँसारभर भाईरल (भिडियो सहित)
कोरोना जितेर पूर्वरानी कोमल शाह अस्पतालबाट डिस्चार्ज
खुसीको खबर: २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै बढी छ हजार १३५ जनाले कोरोना जितेर घर फर्किए
उपत्यका छोड्न चाहनेलाई आयो खुसीको खबर: सरकारले दियो यस्तो मौका
०७८ जेष्ठ ०१ गते शनिबार, आज तपाईहरूको राशि अनुसारकाे भाग्यफल कस्तो छ हेर्नुहोस…
०७८ साल बैशाख ३१ गते शुक्रबार, हेर्नुहोस् तपाईँहरुको राशि अनुसार यस्तो छ भाग्यफल!
०७८ बैशाख ३० गते बिहिबार, हेर्नुहाेस् तपाईंहरूको राशि अनुसारकाे भाग्यफल यस्तो छ
झापामा बृद्ध आमालाई घरबाट निकाले, म’रे पछि दागवत्ती दिन गएका छोरा बुहारीलाई गाउँलेले गरे यसरी घाटमै धुलाई (भिडियो हेर्नुहोस्)
अझै रोकिएन गंगा नदीमा लाश बग्ने क्रम!